भारतीय च्यानल बन्द गरिएपछि डाक्टरले दिए आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो – Saurahaonline.com
चितवन : चितवनको भरतपुर अस्पतालमा काम गर्ने एक चिकित्सकले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनको अभिव्यक्तिबारे प्रहरीले छानविन थालेको छ ।
भरतपुर अस्पतालको मेडिसिन विभागमा कार्यरत डा. ऋतुराज तिवारीले नेपालमा भारतीय समाचार च्यानल बन्द भएपछि एक आपत्तिजनक भिडियो रेकर्ड गराएका थिए । उनले अश्लील शव्द प्रयोग गर्दै हिन्दी भाषामा ‘भारतले सीमा बन्द गरिदिए … खान्छौ नेपाली ? तिमीहरुलाई चीनले … दिन्छ की, जापानले दिन्छ ?’ भनेका छन् । सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको छ ।
विवादास्पद छविका डा. तिवारी गत असार १ गतेबाट दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरी भरतपुर अस्पतालमा नियुक्त भएका थिए । उनीबारे थप छानविनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखेर पठाइने अस्पताल प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले बताए । डा. तिवारीले भने, ‘मैले पनि उहाँको भिडियो हेरेँ, आपत्तिजनक कुरा बोल्नुभएको छ, एक नेपालीले बोल्न नहुने कुरा बोलेको देखिन्छ, अर्को कुरा चिकित्सक जस्तो ब्यक्तिले बोल्ने स्तर त्यस्तो हुँदैन ।’